जनतापाटी सोमबार, पुस ६, २०७७ मा प्रकाशित
लण्डन, बेलायत । नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान, बेलायतले यस वर्षको सम्मान तथा पुरस्कार घोषणा गरेको छ ।
वि.सं. २००३ साल चैत्र १२ गते जनकपुरधाममा जन्मिएका डा. विमलले लामो समय प्राध्यापन पेशा अँगालेर नेपाली तथा मैथली भाषा साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा सेवा गर्दै आएका छन् । उनका कृतिहरुमा समयका आँखा, राजेन्द्र विमलका कथाहरू, इतिहासक धाव र हमरे कथा थिक कथासंग्रह, फिस्टि रानी वालकथा, रोएको जुन र खहरेको तिर्खा रहेका छन् । यसका साथै उनका इतर ब्रहृमाण्ड नाटक, सूर्यस्तंस पहिले गजल संग्रह, मिथिला गौरव र मिथिलाको इतिहास, सस्कृति र कला–परम्परा, गद्य, पद्य र नाटक समालोचना, नेपाल परिचय नवनीत र नेपाली, अग्रेजी, मैथली शब्दकोश लगायत दुई दर्जन भन्दा बढी कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन् । उनलाई साहित्य तथा कला, संस्कृतिको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु-याएवापत ‘प्रतिभा सम्मान २०२०’ प्रदान गरिने भएको हो ।
यसै गरी वि.सं. २०४२ सालमा तेह्रथुम जिल्लाको ओख्रेमा जन्मिएकी कवियत्री विमला तुम्खेवाले वालापन हुँदैदेखि निरन्तर कविता लेख्दै आएकी छिन् । उनका विमला तुम्खेवाका कविताहरू, नदी छाल र तरङ्गहरू, संस्मरण एउटा बूढो रुखको र हत्केलामा पृथ्वी लिएर उभिएको मान्छे लगायतका कविता कृतिहरू प्रकाशित छन् । उनको कविताहरू हिन्दी, अग्रेजी, कोरियन र लिम्बू भाषामा अनुवाद भएको पाइन्छ ।
तुम्खेवा कविता लेखनको साथै पत्रकारिता तथा आख्यान लेखनमा समेत सकृय छिन् भने बिभिन्न सामाजिक कार्यहरूमा पनि संलग्न रहेकी छिन् । कविता साहित्यको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पु-याएवापत कवि तुम्खेवालाई ‘प्रतिभा पुरस्कार २०२०’ प्रदान गर्न लागेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रतिष्ठानले यसअघि दिँदैआएको ‘प्रतिभा सम्मान’ को राशि बीस हजारलाई यस वर्षबाट बढाएर पचास हजार पु-याएको छ ।
यसैबीच आइतबार सम्पन्न प्रतिष्ठानको भर्चुअल सभाले वरिष्ठ साहित्यकार गणेश राईको अध्यक्षतामा चौथो कार्यसमिति चयन गरेको छ । कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा टंक वनेम, महासचिवमा देवेन्द्र खेरेस, सचिवमा नरेश नाति, सहसचिवमा अन्जु अन्जली, कोषाध्यक्षमा चोक गुरुङ र सहकोषाध्यक्षमा निर्मला परिवेश राईलाई चयन गरेको छ ।
एकैपटक ५२ एसपीको सरुवा, को कहाँ पुगे ? [नामावलीसहित] ८ मिनेट पहिले
नेपाल प्रहरीका ५७ डीएसपीको सरुवा, को कहाँ ? १३ मिनेट पहिले
सरकारले भन्यो - १८ गतेपछि निजी अस्पतालमा उपचार गराउने संक्रमितको खर्च व्यहोर्दैनौँ २८ मिनेट पहिले